Markaad Tacsi Direysid Ha Raacsiin Sababta iyo Sida uu Qofka u Dhintay | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Markaad Tacsi Direysid Ha Raacsiin Sababta iyo Sida uu Qofka u Dhintay
Markaad Tacsi Direysid Ha Raacsiin Sababta iyo Sida uu Qofka u Dhintay
Qoraaga faaladaan, Cabdullaahi Maxamed Cali, Cabdullaahi Heersare.
Mahad iyo ammaan oo dhan waxay u sugnaatay Allaah, xumaan iyo nusqaana oo dhan Allaah ayaa ka hufan. Naxariis iyo nabadgalyo dushiisa ha ahaato Nabigeena Maxamed SCW iyo ehelkiisa.
Markii la doonayo shaacinta tirada ku dhimatay cudur dilaa ah ama musiibo waxaa loo oggol yahay in sababta iyo sida sheegaan howl wadeenada caafimaadka iyo dowladda markaasna waxaa waajib ah in la qariyo macaga qofka dhintay.
Cidda kaliya ee xaq u leh in ay ogaato sababta iyo sida uu qofka udhintay waa ehelkiisa, xigtadiisa iyo qofka bartay cilmiga lagu ogaado sababta keentay dhimashada ee loo yaqaano 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐩𝐬𝐲.
Sheegista sababta dhimashada waxaa ka dhalan karo xaalado iyo saameyn xun oo soo wajaho qoyska laga geeriyooday oo ma harto noqoto. Waxaa ogahay, qoysas tilmaam iyo calaamad looga dhigay markii la timaamayo, “waxaa dhalay Odaygii ama Islaantii u dhimatay/dhintay TB-ga, Cagaarshowga iyo waxaa dhalay ninkii isdilay”
Waxaa jiro xaalado ay waajib tahay in laqariyo magaca, sawirka iyo aqoonsiga qofka dhibanaha ah, qofka dhibka geystay iyo qof dhib isku geystay.
Dhibka qofka loo geystay hadduu yahay dhib saameyn xun ku yeelan karo macaga, maamuuska iyo mustaqbalka qofka waxaa waajiib ah in laqariyo magaca iyo muuqaalka qofkaas. Tusaale, qofka lagula kacay fal 𝐤𝐮𝐟𝐬𝐢 ah waa in laqariyaa.
Dhibka uu qofka isku geysto waxaa ka mid ah 𝐭𝐮𝐮𝐠𝐧𝐢𝐦𝐚𝐝𝐚. Qofka tuuga ah waxaa leysga ilaaliyaa si weyn, guryaha markuu yimaado ama xaafadaha soo galo dadka waxay muujiyaan fooginaan dheeri ah, waxkasto oo qiimo lehna meel amni ah ayaa lagashadaa. Waxaa dhacdo in ilmaha yaryar laga ilaaliyo si uusan ficilka tuugnimada uusan u barin. Dadka wanaagsan waa ka fogadaan, shaqana lama siiyo.
Qofka dhibka geysto waxaa loo qariyaa labo arrimood dartooda, waa midee in magaciisa. maamuuskiisa iyo mustaqbalkiisa loo ilaalinaayo iyo in la ilaalinaayo ehelkiisa iyo qaraabadiisa:
Ilaalinta magaciisa iyo mustaqlbkiisa waxaa uga oo hadlay dhibka uu isku geysto qofka.
Si loo ilaaliyo badqabka iyo in aan lagu xadgudbin ehelka iyo qaraabda qofka dhibka geystay waxaa hadbbon haddeey suuragal tahay in laqariyo sifokasto oo lagu garan karo qofka dhibka geystay. Tusaale ahaan, aabe dhib uu geystay ayaa suuragal ah in wiilkiisa loo dilo, ficliyanna way dhacday. Dil uu qof geystay ayaa qoys dhan mar loo dilaa. Iska daaye qoys, qof dhib uu geystay ayaa qabiil dhan loo saariyaa. Qof dhib kuu sameeyey ayaa qaran dhan dusha loo saara.
Ujeeda qoraalkeyga ma ahan u hiilinta iyo in aan leeyahay qofka dambiilaha ha la asturo waayo waxaa jirto dood kale oo leh si leyska ilaaliyo dambiilaha ha lasheego sawiradiisa iyo muuqaaladiisana fagaaraha ha la soo dhigo. Balse, waxaa leeyahay dhacdo kasto iyo qadiyad kasto isku xukun iyo natiijo ma noqon karto.
Cabdullaahi Maxamed Cali, Cabdullaahi Heersare